Masaajidyada ku yaala Maraykanka iyo Canada oo looga duceeyay dadkii lagu Laayay Zoobe. – XAMAR POST
Masaajidyada ku yaala Maraykanka iyo Canada oo looga duceeyay dadkii lagu Laayay Zoobe.
Boqolaal Soomaali ah oo ku nool Wadamada Maraykanka iyo Canada ayaa Shalay Salaadii Jimacaha kadib u duceeyay Boqolaalkii Shacabka ahaa ee lagu laayay Musiibadii ka dhacday Isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho 14-kii Bishaan.
Soomaalida ku nool dalaalkaas iyo Musliimin kale oo ka mid ah Jamaacada Masaajidyada ayaa ka hadlay Bamkii Zoobe waxayna Alle uga Baryeen in uu Caafiyo dadka dhaawacyada ah sidoo kalane Naxariis u weydiiyay dadkii kale ee halkaasi ku dhamaaday.
Masaajidyada Shalay Salaadii Jimcaha kadib Shacabkii ku geeriyooday Bamkii Zoobe looga duceeyay ayaa waxa ka mid ahaa Masaajidka Daarul Hijra oo ku yaala Virginia Dalka Maraykanka waxayna Jamaacada Masaajidkaas ku baaqeyn in Shacabka ay isku duubnaadaan sidoo kale waxay ku baaqeen in La cafiyo dadkii ku dhintay Qaraxaasi deymaha lagu leeyahayna laga Gudo intii aan la ogeyna la cafiyo.
Musiibadii ka dhacday Zoobe 14-kii Bishaan ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteyn 358 ruux sidoo kalane lagu waayay 56 qof halka dhaawacana uu gaarayo 228 qof sida ay xaqiijisay Dowlada Soomaaliya.
TOP NEWS:- Wadadii Uu Qaraxa Ka Dhacay Ee Zoobe Oo Dib Loo Furay
Maamulka Jubbaland oo ku Dhawaaqay Dagaal